Ayax ku Habsaday Degmada Lughaya Oo Laga Dayrinayo. AwdalMedia Awdal Media Ayax ku Habsaday Degmada Lughaya Oo Laga Dayrinayo.
Ayax xoogleh ayaa ku habsaday dhamaan degmada Lughaya kaasoo cagta marinaya daaqa dhulkaasi ka soo baxay xili roobaadkii dayrta lagu jiro.
Duqa degmada Lughaya mud Cabdilaahi Cali Aw Nuur Dixood oo aanu waxka waydiinay masiibadan ku habsatay deegaanka ayaa sheegay in bari iyo galbeedka degmada ay ku arkeen Ayax waaweyn iyo dhashiisa oo hada ka dilaacday, waxaanu ku baaqay in hadii deg-deg wax looga qaban waayo uu aafo weyn reebi doon, waxaanu xusay in loo baahan yahay gacan dheeraad ah oo lagu la dagaalamo Ayaxa.
Dhinaca kale waxaa laga soo sheegayaa in dhul badan oo degmada ka mid ah sida Ceel la helay, Gargaara, Garbada Riiga Karuure Geerisa iyo deegaano kale uu dhibaato weyn ku hayo dadka iyo duunyaba.
Dadka xoolo dhaqatada iyo kuwa beeralayda oo khadka talefonka ugu waramay Wariye Bili bili ayaa yidhi.”Waxaa uu ku habsadey dhamaan meelihii daaqa lahaa, xoolihii way ka cararayaan oo inay daaqaan wuu u diidey” waxayna intaas ku daraan inay wadaan daddaal ay ku doonayaan in ay kaga kiciyaan dhulka.
Sikastaba ha ahaatee deegaanada qaarkood ayaa waxa la sheegay in loo adeegsadey qiiq iyo dhawaqa daasado lagu garaacay oo inbadan dhulka lagaga kiciyey, iyadoo xiligan ay degmada ka curteen roobab la saadaalinayay inay wataan duufaano, balse wali ma jiraan wax khasaaro ah oo ka dhashay roobabkaasi ka curtay xeebaha Lughaya.